Saturday April 03, 2021 - 06:40:45
Ciidamo aad u hubaysan oo katirsan Al Shabaab ayaa saaka aroortii weeraro cagmarin ah kula jarmaaday laba saldhig oo ay maleeshiyaadka dowladda Federaalka uga sugnaayeen Sh/hoose.
Sida ay wararku sheegayaan dagaallo culus oo ay barbar socdeen qaraxyo waaweyn ayaa ka dhacay degmada Awdheegle iyo deegaanka Bariire, ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in gaadiid walxaha qarxa lagasoo buuxiyay lagu weeraray laba saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda kadibna waxaa xigay weerar xoog kugal ah oo ay fuliyeen dagaalyahanno aad u hubaysan.
Dhammaan wixii gaadiid ahaa ee saldhigyada laweeraray yiillay ayaa ugacan galay jihaadiyiinta sida ay sheegayaan warar lagu kalsoonyahay.
Wararka ayaa intaas ku daraya in weerarka ugu xooggan uu ka dhacay Bariire, xoogaga duullaanka qaaday ayaa la sheegay in ujeedkoodu ahaa qabsashada Bariire halka Awdheegle ay ku qaadeen weerar arbushaad ah si ay isku gurmasho ugu diidaan ciidamada dowladda.
war rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka XSHM ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta laba saldhig ayna dhabarka ka jebiyeen maleeshiyaadkii dowladda ee Turkigu tababaray.
"Mujaahidiinta ayaa camaliyaad Istish-haadi ah ku weeraray saldhigyada cadowga ee Awdheegle iyo Bariire, Allaah fadligiis maleeshiyaadkii murtadiinta waa lajebiyay waxaana jira qaniimo farabadan oo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen" ayaa lagu yiri war kooban oo kasoo baxay taliska ciidanka Al Shabaab.